उच्च रक्तचापले मुटु र आँखामा समस्या पार्छ :: a1nepal.com.np
उच्च रक्तचापले मुटु र आँखामा समस्या पार्छ
– डा. लक्की शर्मा
उच्च रक्तचाप कस्तो रोग हो ?
उच्च रक्तचाप मुटुसँग सम्बन्धित रोग हो । विश्वव्यापी समस्या बनेको यो रोग नेपाली तथा दक्षिण एसियाली युवाहरूमा पनि देखा परेको छ । उच्च रक्तचाप भएकालाई पछि गएर मिर्गौला, मुटु तथा आँखासम्बन्धी समस्या हुनसक्छ ।
उच्च रक्तचाप कुन उमेरका मानिसलाई बढी हुन्छ ?
यो समस्या ४० वर्ष माथिकालाई बढी देखिन्छ भनिए पनि हिजोआज बदलिँदो जीवनशैली, व्यायामको अभाव एवं खानपानका कारण युवा उमेरमै देखा पर्न थालेको छ ।
उच्च रक्तचाप हुने कारण के होला ?
सहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकाससँगै यो रोग पनि बढ्दै गएको छ । मोटोपन, बदलिँदो जीवनशैली, व्यायामको कमी, खानपान एवं वंशानुगत कारणले उच्च रक्तचाप हुन्छ ।
उच्च रक्तचाप भए औषधि सेवन गर्नैपर्छ भन्ने छ ?
सबैको रक्तचाप २४ घन्टामा थपघट भैरहन्छ । रक्तचाप सधै १५०/९० रहन्छ भने त्यसलाई बढ्न नदिन औषधि सेवन गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म औषधि सेवन नगरे मुटु, आँखा तथा मिर्गौलामा असर पर्नसक्छ । मुटु सुन्निने, आँखाको प्रेसर बढ्ने तथा मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ ।
रक्तचापलाई ठीक मात्रामा राख्न के गर्न सकिन्छ ?
रक्तचाप ठीक राख्न खानपानमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । चिल्लो तथा मसालेदार खाना खानुहुँदैन । सागपात तथा फलफूल प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ ।
मास्कमाण्डुबाट काठमाण्डौं बनाउने ‘कडा लालबाबु’को यस्तो योजना स्थानीय सरकारको मनपरी, गाडी भाडाका नाममा ब्रह्मलुट करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा पेट सफा हुँदैन ? यस्तो छ सजिलो उपचार क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा सास फेर्न गार्हो हुन्छ वा दम छ? यसरी उपचार गर्न सकिन्छ प्युठान जिल्ला अस्पतालमा डिम्बाशयमा हुने जटिल खाले पानीको फोका(DERMATOID CYST) को अप्रेशन दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियालाई हराएर फर्किदै प्रहरीमा एआइजी र डिआइजीको दरवन्दी थप, भाग्य खुल्यो घर जान लागेका डीआईजीको आफ्नै बाबुवाट बारम्बार बलात्कार , बलात्कारपछि गर्भवती भएपछि भ्रुण हत्या
← पेट सफा हुँदैन ? यस्तो छ सजिलो उपचार	राष्ट्रियसभाका मनोनित सदस्यको सपथ रोक्न सर्वोच्चको आदेश →
इजरायली संसद भंग, नयाँ चुनाबको घोषणा – गठबन्धन सरकार बनाउन प्रम नतान्याहु असफल
एनआरएरए इजरायलका पूर्व अध्यक्ष दिपक ओलीको “ए माया” सार्वजनिक
जरो र किलो नेपालमा भएको अन्तराष्ट्रिय शक्ति इजरायल तदर्थ समिति गठन
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच फेरि तनाव, गाजामा थप हवाई आक्रमण तिब्र पार्न नतान्याहुको आदेश
इजरायलमा कृषि काम गरेका श्रीकृष्ण अधिकारीले नेपालमा गर्दै छन् कृषि क्रान्ति (भिडियोमा हेर्नुहोस्)
इजरायलमा संसदिय निर्वाचन : नेतान्याहु पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का